Madaxweyne Farmaajo oo maanta si aan caadi ahayn looga soo dhaweeyay Sucuudiga (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo maanta si aan caadi ahayn looga soo dhaweeyay Sucuudiga (SAWIRO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Riyaadh ee dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya, halkaas oo si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu ka dagay garoonka diyaaradaha ee King Khalid International Airport magaalada Riyaadh, waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay Barasaabka gobolka Riyaadh Faysal Bin Bandar Al Saud iyo wasiiru dowlaha xukuumadda Dr. Mussaed Bin Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markaasi kadib kulan la yeeshay boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis Al Saud oo ay wehiyaan qaar ka mid ah wasiiradda dalka Sucuudiga, waxayna labada dhinac ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya labada dal.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in xilliyada soo socdo uu tago magaalada barakaysan ee Makka Al-mukaramma, halkaas oo uu doonayo inuu kusoo cumreysto islamarkaana uga soo duceeyo shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo waxaa safarkiisa ku wehliyay xaaskiisa iyo mas’uuliyiin kale oo ay ka mid yihin la-taliyaashiisa kala ah Fahad Yaasiin Xaaji Dahir, C/risaaq Axmed, Thabit Cabdi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar.